ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဝမ်းချုပ်လိုက်၊ ဝမ်းလျှောလိုက် ဖြစ်နေလို့ပါ . . . – Healthy Life Journal
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဝမ်းချုပ်လိုက်၊ ဝမ်းလျှောလိုက် ဖြစ်နေလို့ပါ . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာ ငါးလရှိပါပြီ။ ဝမ်းချုပ်လိုက်၊ ဝမ်းလျှောလိုက် ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဝမ်းမှန်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင် ဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲရှင့်။
A. တချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မကြာခဏ ဝမ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝမ်းချုပ်တတ်ရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးစတာတွေကို တစ်နေ့ ၆-၈ ကြိမ် စားပေးရပါမယ်။ ရေဆိုလည်း တစ်နေ့ခြောက်ခွက်ကနေရှစ်ခွက် သောက်ပေးရပါမယ်။ ဝမ်းချုပ်တာကို ပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့တော့ မရပါဘူး။ ဝမ်းချုပ်တာ ကြာလာတဲ့အခါ Pile လို့ခေါ်တဲ့ လိပ်ခေါင်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန် သွေးကြောတွေက နည်းနည်းကြီးလာပြီး သွေးခဲပိတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခြေသလုံးမှာ သွေးကြောလေးတွေ ထုံးသလို စအိုထဲမှာရှိတဲ့ သွေးကြောတွေကလည်း နည်းနည်းဖောင်းကားလာတာကြောင့် ဝမ်းချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတိထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။
နောက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ ဝမ်းလျှောတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝမ်းလျှောရင်တော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အများကြီးစားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ၄ ကြိမ်လောက်စားပေးရင် ရပါပြီ။ ဓာတ်ဆားရည်တော့ သောက်ရပါမယ်။ သိပ်များလာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသရမှာပါ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ပိုးသတ်ဆေးတွေသောက်တာ ရှောင်ရပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်သုံးလအတွင်းဆို ဆရာမတို့က ဘယ်ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးမှ မသောက်ခိုင်းပါဘူး။ ကလေးဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု ထိခိုက်မှာစိုးလို့ပါ။ ဖျားတယ်ဆိုရင်တော့ ပိုးသတ်ဆေးမပေးပါဘူး။ ပါရာစီတမောလောက်ပဲ သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံး ကိုယ်ဝန်ယူတဲ့သုံးလက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သေချာဂရုတစိုက်မရှိရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသွားနိုင်လို့ပါ။
Related Items:Diarrhea, healthy, Pregnancy
၀မ်းချုပ်နေလျှင် အမြန်ဆုံး ဝမ်းသွားစေမည့် နည်းလမ်းများ